ရန်ကုန်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုကိုမောင်းနှင်သည့်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ထိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၇၀% သောလှုပ်ရှားမှုများသည်ရန်ကုန်တွင်ဖြစ်ပွားပြီးအခြားပြည်နယ်နှင့်ပြည်နယ်များသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
Samanea သည်ထင်ရှားသော Yiwu International Market တွင်အတွေ့အကြုံရှိသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူရန်ကုန်ရှိစားသုံးသူများနှင့်လက်လီရောင်းချသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Samanea Yangon Market သည်အကြီးစားလက်ကားနှင့်လက်လီစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပဲခူးမြစ်လမ်းနှင့်ရတနာလမ်းဆုံလမ်းဆုံရှိဒဂုံဆိပ်ကမ်းရှိဖွံ့ဖြိုးမှုareaရိယာသစ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်သည်squareရိယာ ၃၀၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းပြီး၊ ၁၀၀၀၀၀ မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
Samanea Yangon Market Phase 1
Yangon Market is 15 km from Yangon due to easy access to public transportation. It is 16 km from Yangon International Terminal and 18 km from Yangon International Airport.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီမံကိန်းကိုအထူးပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်စဉ်းစားထားသောထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဆန်းသစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်လူထုတည်ဆောက်သူများအပြင်အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့များ၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာဂုရုများနှင့်အခြားမည်သူမဆိုကိုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏လုပ်ငန်းနှင့် Samanea ရှိသင်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ
လိပ်စာ: ပဲခူးမြစ်လမ်းနှင့်ရတနာလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်+ 95 09 976069999 / + 95 09 976089999
© Samanea Yangon Development Limited.